Abdul, Author at Central Youth LinkCentral Youth Link
“Calaf nimuu u diidoo cuni waaya mooyee, ciideenu waa hodan”. Dhulkeena oo Eebbe ku mannaystay xeebta ugu dheer Afrika, 3 webi, beero, xoolo nool iyo kalluuna leh ayaan intifaacsigiisii dhabta ah loo soo jeesan wali! Walow ay dowladdii KACAANKU in … Sii Akhri »
Talaado, May 7, 2015, Ururka isku xirka dhalinyarada Soomaaliyeed ee Central Youth Link (CYL), ayaa maanta kulan wadatashi ah ugu qabtay degmada Cadaado ee xarunta shirka maamul u sameynta gobolada Mudug iyo Galgaduud. Kulankan ayaa waxaa ka soo qeybgalay dhaqanka … Sii Akhri »
Barnaamijka dhiirrigelinta qoraaga Soomaaliyeed, waa barnaamij ay Central Youth Link ugu talo gashay, sare u qaadidda xaddiga agabka ku qoran Af-Soomaaliga. Waxaa sidoo kale looga gol leeyahay barnaamijkaan in lagu himmad geliyo da’yarta Soomaaliyeed ee jecel in ay afkooda hooyo … Sii Akhri »
Haddii aan samaano, hoggaankuna wuu samaan. Sida qof caafimaadqaba uu ugu bukoodo dhexjoogida dad jirran, hoggaanka fiicanina wuu ku dhex doorsoomaa, oo ku dhex jirradaa bulshada xun. Haddii aan samaanana, oo wanaagga iyo waxa inaga dhexeeya aannu wada ilaashano, way … Sii Akhri »
Qoraa Keenyaan ah oo qoray buuggii caanka ka ahaa dugsiyada sare ee Kenya “My Life In Crime” ayaa wuxuu yiri sidatan, “haddii been aad alliftay aad ku cel celiso dhawr jeer, adigii allifay baa run u malayn doona”! Hadaba, marka … Sii Akhri »
Qabiilkaaga iyo qaranka kee mudan? Waxaa shaki la’aan ah in qabiilkaagu aanu difaaci karin xaduudaha Soomalia, bad, birri iyo cir midnaba! Isla mar ahaantaana aanu awood u lahayn in uu iska difaaco duullaan dibadda kaga yimaada. Ingiriis, Talyaani, Faransiis iyo … Sii Akhri »
Ayadoo labaatankii sano ee lasoo dhaafay ay dalka halakeeyeen dhibaatooyin amni darro, dhaqaale iyo kuwo siyaasadeed oo gurracan, isla mar ahaantaasna arrimaha dalka wax laga weydiin jiray, hoggamiyaal is-magacaabay oo danahooda siyaasadeed sii marsiin jiray tubta qabyaaladda, ayaa waxaa sanooyinkan … Sii Akhri »
Bishii May 25 keedii illaayo 26keedii, waxaa magalaada Nairobi ka dhacay aqoon korosi ay soo qabanqaabisay Central Youth Link, kaasoo ay ka faa’iideysteen 16 qof oo badankood xubno ka ah ururka dhallinta Soomaaliyeed ee Central Youth Link. Aqoon-kororsigaan oo ay … Sii Akhri »
Galitaankii Kenya Ay Gashay Soomaaliya iyo Danaha Dahsoon
Posted on September 9, 2012 by Abdul
16 kii Oktoobar, 2011 kii ayay ahayd markii ciidamo Kenyan ah oo lagu sheegay 3000 oo askari, balse la aaminsanyahay in ay caddadkaas aad uga badanyihiin ay ka gudbeen soodinta kala qaybisa labada dal, taasoo ay Dowladda Kenya ku macnaysay … Sii Akhri »
Baarlamaanka Cusub iyo Yiddidiilada Ummadda
Posted on September 3, 2012 by Abdul
Kaddib doorashadii Mudaneyaasha Baarlamaanku ay u doorteen Prof. Maxamed Cismaan Jawaari Guddoomiyaha Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya (GBJFS) 28 kii Agoosto, 2012 ka, ayaa waxaa isa soo taraya rajada ummaddu ay ka qabto baarlamaanka cusub. Rajooyinkaas oo isugu jira kuwo waqtiga … Sii Akhri »